घरलाई नयाँ लूक दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा - IAUA
घरलाई नयाँ लूक दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
ramkrishna November 30, 2017	घरलाई नयाँ लूक दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
घर त्यो ठाउँ हो, जहाँ तपाईंले आफ्ना सपनाहरू सजाउनुभएको हुन्छ । अब कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंको घरको छत पानीले भरिएको होस् । साथै, त्यसमा चिराहरू परेको होस, घरका भित्ताहरूको रङ भद्दा होस् । के तपाईंको सपनाको घर यस्तो हुन्छ ? यस्तो कहिले पनि हुन सक्दैन । त्यसैले, हरेक घरलाई केही समयको अन्तरालमा नवीकरणको आवश्यकता पर्छ । तपाईंलाई घरको कहिले नवीकरण गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । यदि तपाईंको घरमा कुनै कार्यक्रम हुनेवाला छ भने घरको रिनोभेशन गराउनु एकदमै आवश्यक हुन्छ । किनकि, यस्तो समयमा घरमा धेरै मानिस आउँछन् । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने मोटामोटी बजेट पहिले नै तपाईंले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट तपाईंलाई कुन ठाउँमा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको थाहा हुन्छ । तपाईंले त्यही हिसाबले सामान खरीद गर्नुपर्छ । यस्तो गर्नांले तपाईंले छुट्ट्याएकोे बजेटले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ घरको नवीकरण गर्दा के गर्ने भनेर एउटा रिपोर्ट तयार पारिएको छ ?
तपाईंले घरको नवीकरण गर्नुभन्दा अगाडि कति खर्च लाग्छ भनेर बजेट तयार गर्नुपर्छ । पहिले नै बजेट तयार पारेर त्यहीअनुरूप खर्च गर्दा तपाईंलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।
सही ठेकेदारसँग कुरा गर्नुहोस्
घरलाई सही तरीकाले मर्मत गर्न राम्रो ठेकेदारसँग कुरा गरेर बजेट कति लाग्छ, त्यसको तय गर्नुपर्छ । झूठो कुरा गरेर फसाउने मान्छेको पछि लाग्नुहुँदैन, जुन व्यक्तिसँग अनुभव छ, त्यसैसँग काम गराउनुपर्छ ।
सूची तयार गर्नुहोस्
तपाईंको घरमा के–के काम गराउनुपर्ने छ, त्यसको एउटा सूची तयार पार्नुहोस् । घरमा कुनै डिजाइन बनाउनुपर्नेछ । साथै, अरू कुनै ठाउँमा कुनै सृजनात्मक लुक दिनु छ भने त्यसको टिपोट गर्नुपर्छ । यसबाट काम चरणबद्घ रूपमा गर्न सहयोग मिल्छ ।
नियमका बारेमा बुझ्नुहोस्
घरमा कुनै पनि नयाँ कुरा गर्नुभन्दा पहिले त्यस ठाउँको मान्यताका बारेमा जान्नुपर्छ । अन्यथा, पछि तपाईंलाई नै घाटा हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारी अधिकारीसँग कुरा गर्नुपर्छ । यदि त्यसका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ भने त्यो लिनुहोस् ।
काममा निगरानी राख्नुहोस्
आफ्नो घरमा काम भइरहेका बेला आफू अगाडि हुनु जरुरी हुन्छ । किनकि, तपाईंलाई कुन बेला के गर्नुपर्छ, त्यो थाहा हुन्छ । यसो नगर्दा केही बिग्रियो भने तपाईंलाई नै नोक्सान हुन जान्छ ।
ऋण लिन सक्नुहुन्छ
यदि तपाईंले ठूलोस्तरमा घरको नवीकरण गर्न गइरहनु भएको छ भने ऋण लिनेबारे विचार गर्न सक्नुहुन्छ । धेरै बैङ्कले यस्तो कामका लागि कर्जा दिन्छन् । यस प्रकार घरको नवीकरण गर्दा माथिका कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । प्रत्यक ३/३ वर्षको फरकमा घरको नवीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ । यसले गर्दा घरको चमक रहिरहन्छ ।
Previous Previous post: नाकाबन्दी हुँदा पनि कतारमा तीव्र आर्थिक बृद्धि
Next Next post: मेरो सङ्घर्ष केवल प्राप्तिको लागि मात्र होइन ।